बिहिबारसम्म भारी वर्षा हुने, सतर्क रहन मौसमविदको आग्रह ! – Rastriyapatrika
बिहिबारसम्म भारी वर्षा हुने, सतर्क रहन मौसमविदको आग्रह !
२६ चैत, काठमाडौं । एक सातादेखि देशका अधिकांश भूभागमा जारी वर्षा अझै केही दिन यथावत रहने भएको छ । पूर्वी तथा मध्य तराईमा भने आँधीहुरी चल्ने प्रक्षेपण जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले गरेको छ ।यसअघि महाशाखाका मौसमविदले सोमबारबाट मौसममा क्रमिक सुधार आउने बताएका थिए । तर, महाशाखाले मंगलबार ३ दिने बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै देशका अधिकांश भागमा वर्षा तथा हावाहुरी चल्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।मौसमविद मञ्जु बासीले भनिन्, ‘छिटोछिटो मौसमी प्रणाली विकसित भइरहेको छ । फेरि नयाँ प्रणालीले अहिले पानी पारिरहेको छ ।’
मौसमविद मञ्जुका अनुसार मंगलबार पश्चिममा पोखरादेखि पूर्वमा ताप्लेजुङसम्म अधिकांश स्थानमा सामान्यदेखि पूर्ण बदलीको अवस्था छ । र, त्यो क्षेत्रको अधिकांश स्थानमा वर्षा पनि भइरहेको छ । पोखरादेखि पश्चिमको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली छ भने तराई भूभागमा मौसम सफा रहेको उनले बताइन् ।काठमाडौं उपत्यकामा अझै केही घण्टा पानी पर्ने छ । तर दिउँसोपख पानी पर्न रोकिए पनि बदलीको अवस्था भने रहिरहने अनुमान छ ।
अहिले प्रिमनसुन सक्रिय छ । मौसमविदहरुका अनुसार नेपालमा सामान्यता मार्च, अप्रिल र मेसम्म प्रिमनसुन गतिविधि हुन्छ र जुन १० बाट मनसुन सुरु हुन्छ । अघिल्लो वर्षसँग तुलना गर्दा यस वर्ष प्रिमनसुन असामान्य तरिकाले सक्रिय छ ।
गत वर्ष अप्रिल महिनाभर काठमाडौंको एयरपोर्ट केन्द्रमा १३८ मिलिमिटर पानी परेको मौसम विज्ञान विभागको रेकर्ड छ । यस वर्ष अप्रिल १ देखि ९ तारिकसम्म आउँदा २० मिलिमिटर पानी परेको छ । यस्तै अवस्था जारी रहे सामान्यभन्दा बढी वर्षा हुनसक्ने विभागको अनुमान छ । मौसमविद बासीले भनिन्, ‘हिजोआजको मौसमी प्रणालीहरुलाई हेर्दा यस वर्ष प्रिमनसुन सिजनमा सामान्यभन्दा बढी नै पानी पर्ने देखिन्छ ।’मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार, मंगलबार हिमाली भेगमा हिमपातको समेत सम्भावना छ । बुधबार बिहान भने वर्षाको सम्भावना नरहेको मौमसी बुलेटिनमा उल्लेख छ । यद्यपि, अपराह्नपछि भने मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षा हुनसक्ने अनुमान महाशाखाले गरेको छ ।बिहीबार पनि देशका पूर्वी र मध्य भाग वर्षाकै चपेटामा रहनेछन् । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार, बिहीबार यी स्थानमा मेघ गर्जनका साथ हल्का वर्षाको सम्भावना छ ।